उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमित ४ हजारभन्दा बढी..... - Bagaicha.com
उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमित ४ हजारभन्दा बढी…..
२७ पुष २०७८, मंगलवार ०७:३०
काठमाडौँ — नेपालमा कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या ८ हजार हाराहारी पुगेको छ । सोमबारको तथ्यांकअनुसार यो संख्या ७ हजार ८ सय ५५ छ । उपत्यकाका तीनै जिल्लामा ४ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । काठमाडौंमा २ हजार ६ सय ५५, भक्तपुरमा ६ सय ३३ र ललितपुरमा ९ सय सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यी जिल्लामा कुल सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या ४ हजार १ सय ८८ रहेको छ । यस्तै, सुनसरी, कास्की, बाँके र कैलालीमा २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । संक्रमण हालसम्म ७५ जिल्लामा फैलिएको छ । एक साताअघि पुस १९ मा सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, मुगु र बाजुरा कोरोना संक्रमण शून्य थिए । हाल मुस्ताङ र मुगुबाहेक अरू जिल्लामा पनि संक्रमण विस्तार भइसकेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले संक्रमण बढ्दै जानुमा कारक ओमिक्रोन नै हो भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिने बताए । ‘ओमिक्रोनले नै संक्रमण फैलाइरहेको हो, होइन भन्ने कुरा अझै यकिन भइसकेको छैन किनभने बीचमा डेल्टा भेरिएन्ट पनि सँगसँगै थियो,’ उनले भने, ‘भारतमा पनि संक्रमण बढेको छ तर धेरै संख्यामा ओमिक्रोन देखिएको छैन । डेल्टा र ओमिक्रोन सँगसँगै कुदिरहेको पो हो कि भन्ने पनि छ ।’ डा. पुनका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भेरिएन्टमा सामान्य जीउ दुख्ने, खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने लक्षण थियो । बेलायतमा पनि उस्तैउस्तै लक्षण थकित हुने, नाकबाट पानी बग्ने, जीउ दुख्ने देखिएको छ । ‘ओमिक्रोनको लक्षण रुघाखोकीसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ । संक्रमण संख्या बढेको देखिए पनि अस्पतालमा बिरामी भर्नाको विश्लेषण गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । संक्रमणदर बढेसँगै तेस्रो लहरको संकेत देखिइसकेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्मका अध्ययनअनुसार ओमिक्रोन छिटो फैलिन्छ, तर डेल्टाभन्दा कम घातक छ,’ उनले भने, ‘संक्रमितको लहर मात्रै बढ्ने हो कि अस्पताल भर्ना हुने दर पनि बढ्छ, त्यो हेर्न जरुरी छ । तर ओमिक्रोनबाट त्रसित हुनुभन्दा पनि सतर्क रहनुपर्छ ।’
पछिल्लो २४ घण्टामा ११ हजार ४ सय २९ नमुनाको पीसीआर र एन्टिनेन परीक्षण गरिएकामा १ हजार ४ सय ४६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । परीक्षणका आधारमा यो १२.६५ प्रतिशत हो । ८ हजार ९ सय ६५ पीसीआर परीक्षणमा १ हजार ३ सय ५७ जना अर्थात् १५.१३ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । २ हजार ४ सय ६४ एन्टिजेन परीक्षणमा ८९ जना संक्रमित भेटिएका छन् । साताअघि पुस १९ मा संक्रमणदर २.६० प्रतिशत रहेकामा सोमबार १२.६५ प्रतिशत पुगेको छ । संक्रमण बढे पनि अस्पतालमा भर्ना दर भने कम देखिएको छ । वीर, शुक्रराज ट्रपिकल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन, निजामती कर्मचारी, भक्तपुर, धुलिखेललगायत अस्पतालमा आइतबार २ सय जना भर्ना भएकामा सोमबार १ सय ६१ मात्र छन् । मन्त्रालयका अनुसार होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या भने तीन दिनयता एक हजारका दरले वृद्धि भइरहेको छ । होम आइसोलेसनमा बस्ने सोमबार ७ हजार २ सय ४५ जना पुगेका छन् । एचडीयूमा भर्ना हुने ८० जनाबाट बढेर सोमबार १ सय ३ जना पुगेका छन् । तर, आईसीयूमा रहनेको संख्या ३३ बाट घटेर २५ जनामा झरेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख १० हजार ५ सय ९४ जनाले कोभिडविरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म २ करोड ६१ लाख ९४ हजार ६ सय १६ डोज खोप लगाइएको छ । कुल जनसंख्याको ४९.६ प्रतिशतले कम्तीमा एक डोज लगाइसकेका छन् भने ३६.७ प्रतिशतले पूर्ण डोज लगाएका छन् । लक्षित जनसंख्यामा ७५.६ प्रतिशतले एक र ५५.९ प्रतिशतले पूर्ण खोप पाएका छन् । साभार : इका